Zvimwe pane iyo GOTY 2019: Iyo mitambo ipfupi yakanyanya yegore yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Zvizhinji nezve iyo GOTY 2019: Iyo yakanakisa ipfupi mitambo yegore yeLinux
Ndiani akati hapana mitambo yeLinux? Iyo Gaming paLinux saiti yakaburitsa mhedzisiro ye 2019 kudhinda kwavo kwegore negore Game YeGore ongororo. Pano y pano unogona kuwana kuti ndeapi akanakisa maturusi uye mitambo yakanakisa yakasarudzwa nevaverengi vayo.
Iye zvino ngatitangei tiende kuchikamu uko mitambo mipfupi inopihwa.
1 Zvizhinji nezve iyo GOTY. Iyo Yakanakisa Ipfupi Mitambo Zvinoenderana neGaming PaLinux Vaverengi
1.2 Kukwira Kupfupi
1.3 Space ngoni
1.4 Mukoko nguva
Zvizhinji nezve iyo GOTY. Iyo Yakanakisa Ipfupi Mitambo Zvinoenderana neGaming PaLinux Vaverengi
En mutambo uyu iwe unotora chinzvimbo chehombe dhiza iyo inofamba nepasi pevhu chinoshanduka kutiza whims yeMukadzi weMhanza. Paunenge uchirwisa zvikara unofanira kugadzirisa zano rako kuti upindure kune izvo mukana unoraira.
Iwe unogona kusarudza kubva kune akati wandei mavara ane akasiyana masitaera ekutamba. Semuyenzaniso:
Mbavha, iyo inodhonza midziyo yevavengi chero nguva.
Iyo Robhoti, uyo anokunda dhaisi achitamba blackjack.
Muvambi, uyo anotorwa nekufemerwa kwechinguva uyezve anofanira kuparadza chigadzirwa chake kuti ashandise zvakare zvidimbu.
Mamwe mavara ndeaya; jester, murwi uye muroyi.
Vavengi havasi kushayikwa futi. Uchasangana aaRopa-rinoyamwa mweya, zvisikwa kubva mungano yeIrish, uye ngatirege kukanganwa vakapfava, vane hutsinye varume vechando.
Kuedza kuponesa hupenyu hwako nekutiza kubva mugomba raMadzimai eLuck kunonetesa chero munhu. Uye ndeipi nzira iri nani yekupora pane kufamba mumhepo nyowani?
Kutamba na Kukwira Kupfupi tichakwanisa kukwira, kukwira uye kubhururuka nepakati penzvimbo dzine runyararo dzemakomo eHawk Peak Provincial Park. Tichava nemukana wekusarudza kutevera nzira dzakatarwa kana kuongorora kumaruwa apo isu tichifamba kuenda kumusoro. Tiri munzira, tichasangana nevamwe vanofamba-famba, towana pfuma yakavanzwa, uye nekucherechedza nyika yakatikomberedza.
Isu ndisu tinogadza nhanho tichiti kana tichida kutora nguva hove pamahombekombe erwizi, kushambira pamhenderekedzo yegungwa kana kutora pfuma yakavanzwa. Munguva yerwendo tichasangana nevamwe vanofamba-famba vatinogona kutanga navo hushamwari nekubatsirana.
Space ngoni Ndicho nzvimbo yekurwa mutambo wevanoda adrenaline. Vagadziri vacho vanoti huwandu hweprojekita uye lasers pachiratidziri zvinongopfuura nenhamba yenyeredzi muchadenga.
Munguva dzese dzenzvimbo mumutambo dIwe unofanirwa kunzvenga, kudzingirira, kupfura, kuperekedza uye kubvisa zvachose vavengi, kubva kumadroni madiki kusvika kuzvikepe zvikuru zvehondo. Chete pane mutemo waunofanira kuteerera. "Kana ichifamba, inofa."
Asi, iwe unenge usiri kuwana zviri nyore. Tiri kutaura nezvehondo huru munguva chaiyo, iine anosvika mazana emahara ezvipenga pachiratidziri panguva imwechete. Asi, kana iwe uchida kutanga kuzasi iwe unogona kutanga nediki diki (pakati pe3 ne10 ngarava). Kana iwe uri wakanaka kwazvo, unogona kugadzira yako pachako hondo ne anosvika zviuru zvina ngarava.
Vagadziri vacho vakafungawo nezvevanhu vane nguva shoma. Iyo "kofi yekuzorora" maitiro anoronga hondo dzako kubva pamaminetsi matatu kusvika gumi.
Space Merc yakagadzirirwa kushandiswa nekhibhodi uye gamepad
Iko hakuna kuramba kuti Kubhejera Pane vaverengi veLinux vane hutano hwakasiyana mukuravira kwavo.
Kana iwe wakaneta nekuita raramo senzvimbo yemamenari izvozvi unogona kuyedza kuchengeta nyuchi.
Mukoko nguva (Hive Nguva) chirongwa chekufananidza chevane manejimendi apiyari. Mariri munofanira kuunganidza zviwanikwa, kukohwa huchi uye mugadzire mambokadzi mutsva iyezvino asati afa.
Mutambo uyu unomiririra zvakaringana mabasa anoitwa nenyuchi imwe mukati meapiyari uye basa renyu nderekuona kuti vanozviita. Tumirai vanounganidza mukume mukume uye nekita, itai kuti vavaki vatsvage mhando nyowani dzemasero, uye muve nechokwadi chekuti mune nyuchi dzakaringana kusimudza chizvarwa chinotevera chenyuchi.
Asi, usafunge kuti hondo dzichashaikwa. Iwe zvakare uchafanirwa kupindura pakurwiswa kwemazavi uye kubata nevapambi slugs.
En mutambo uyu pazviitiko unotenderera mepu nenzira chero yaunoda. Zvichienderana nezvamunofunga kuenda, uchave nekusangana kwakasiyana kwaunogona kupindura nenzira dzakasiyana.
Ichi chikumbiro chinova nechokwadi chekunakidzwa sezvo pasina chinogoneka mhedzisiro uye makumi mana nezvakawanikwa zviripo. Mazana emifananidzo uye manzwi mhedzisiro zvinopihwawo.
Wakatamba chero mitambo mitsva yeLinux gore rino? Iwe unofungei nezvazvo? Shandisa fomu yedu yekutaura kuti utiudze.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvizhinji nezve iyo GOTY 2019: Iyo yakanakisa ipfupi mitambo yegore yeLinux
Zvinonakidza… Ini ndaingoziva Space Merc…. vamwe vachatofanira kuona kuti vakadii.